Vanhu Votya Kutaura Pfungwa Dzavo Vaona Mauto paMusangano weCOPAC
Chikunguru 26, 2010
Mauto matatu anonzi apinda mumusangano wekunzwa pfungwa dzevanhu waitirwa paGwebi College neMuvhuro mudunhu reMashonaland West. Mauto aya anonzi ati anoda kuti chigaro chemutungamiri wehurumende chibviswe mubumbiro remitemo idzva, pova nemutungamiri wenyika chete.
Mauto aya ataura pamberi pevanhu pamusangano weCOPAC wekunzwa zvinofungwa nevanhu kuti zvinge zviri mubumbiro idzva remitemo yenyika.
Asi kuvepo kwemauto akapfeka nhumbi dzepabasa hakuna kufadza veruzhinji. Vamwe vanhu vanga vari pa Gwebi College vanoti zvaitwa nemauto aya, inzira yekuda kutyisidzira veruzhinji kuti vasataure vakasununguka pazvinhu zvavari kuda kuti zvinge zviri mubumbiro idzva.
Kunyange hazvo hurongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu huri kunzi huri kufamba zvakanaka mune dzimwe nzvimbo, vatyairi vemotokari dziri kushandiswa neCOPAC, pamwe nevamwe vashandi veCOPAC mudunhu reMidlands vanonzi vanga vava kukanda mapadza pasi vachinyunyuta nemabatirwo avanoti vari kuitwa, zvikuru panyaya dzekubhadharwa.
Izvi zvinonzi zvanonotsa kutanga kwemisangano munzvimbo dzeShurugwi neZvishavane. Rimwe dambudziko rinonzi ranonotsawo hurongwa uhu, kushaikwa kwemafuta edzimotokari.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC, VaDouglas Mwonzora, vanoti hapana chakaipa kuti mauto ange achipawo pfungwa dzawo pachena.
Mumwe wevari kutungamira hurongwa uhu mudunhu reMidlands, uye vari nhengo yeZanu PF, VaJorum Gumbo, vanoti musangano wavaita neMuvhuro wange uri wekuronga mashandiro avachange vachiita svondo rino.
Ukuwo sangano re NCA rinoti rabuda nezvisungo pamusangano waro wemazuva matatu wekuzeya nyaya yebumbiro idzva remitemo. Sangano iri rakakoka hutungamiri hwaro mumatunhu ose kuti rizeye zviri kuitika mukunyorwa kwebumbiro idzva, uye kuti ribude nehurongwa hwekutevedza.
Zvimwe zvezvisungo zvabuda pamusangano uyu, zvinosanganisira kusimbaradza chirongwa che Take Charge Campaign, chinoshoropodza hurongwa hwehurumende.
Mutauriri weNCA, VaMadock Chivasa, vanoti sangano ravo richaramba richishoropodza chirongwa chiri kutungamirwa nehurumende.
VaChivasa vatiwo nhengo huru dzesangano ravo dziri muchirongwa cheCOPAC dzinofanirwa kusiya basa iri, dzova nhengowo zvadzo.